Akụkọ - Akpachara anya maka Inoculation Loop Infrared Sterilizer
1. A ghaghị iji loops inoculation mee ihe mgbe ị na-ekiri ọdịdị nje bacteria sitere na ụdị ma ọ bụ omenala.Usoro mgbanaka inoculation bụ nke nickel na-eguzogide waya ma ọ bụ waya platinum pụrụ iche nwere ogologo ihe dịka 5-8cm na ike siri ike, nke a na-etinye na ígwè ma ọ bụ mkpanaka iko.Ndị na-enweghị mgbanaka ka a na-akpọ agịga ịgba ọgwụ mgbochi.
2. Mkpanaka ígwè ma ọ bụ mkpanaka iko akụkụ nke inoculation loop n'ime oghere nke infrared sterilizer aghaghịkwa ịtụgharị maka ịmịnye nwa.
3. The infrared sterilizer nwekwara ike igba ogwu na microbial omenala tube nke iko ihe.N'oge a, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya pụrụ iche na ọ dịghị mmiri mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na tube ahụ, iji zere ihe mberede dị ize ndụ dị ka nsị ma ọ bụ mgbawa nke mmiri mmiri n'ime.
4. Mgbe achọpụtara ihe ndị na-enweghị ntụpọ na ntụpọ, a ga-etinye ha ozugbo n'ime ọgwụ nje maka ịmị nwa.
5. Mgbe ị na-eji ihe mmịfe microscope, jide n'aka na ị ga-ekpochapụ nje bacteria ndị nwere ntụpọ na slide microscope tupu i jiri ha mee ihe, ma ọ bụghị ya, enwere ike ịme nchọpụta na-ezighị ezi mgbe ị na-eji ha ọzọ.